Siyakwamukela Sail 'n’ o gavriliuk ir kvitka
Self Classic Yakha Isikebhe Amacebo Small namaPhetheni
Kwadalwa John Sheen, ezinze Cowes-Isle of Wight e-United Kingdom, miklamo balingwa futhi lwahlolwa esekelwe ukuphila kwakhe konke ebonisa isakhiwo isikebhe.
Amaphethini olunikezwe yi Sail'n'Oar bafa ngokunembile ukulondoloza Umakhi isikhathi eside kanye nezindleko. Ababona nje ukusiza nge abakha nohlaka ukwakha isikebhe sakho phezu, Eqinisweni akekho kwalokho iyadingeka. Umklamo ukwakhiwa sidaliwe ukunciphisa isikhathi isakhiwo. Asikho isidingo ukucaca imidwebo, ukwenza izifanekiso umbhali azungeze izindawo kunzima. Vele ubeke amaphetheni phezu kwezinkuni, uphawu emhlabeni bese usika.
Easy yokwakheka Projects – Ibanga yethu Classic Isikebhe Izinhlelo For You Ukuze Yakha
Span n Oar Ukuqalisa Inqola
Ukusebenzisa amaphetheni ukumaka wanquma ukhuni yakho ikude ukonga ngaphezulu kuka ukuthenga isikebhe ikhithi lapho ukhokha ukuba Umumo ukuphuma ukuthi ngeke kalula ukuphatha ngokwakho. Cishe ugcine lukhulu ku izindleko imithi plywood kakhulu.
Ngaphezu kwakho konke uzoba ukwaneliseka yokudala isikebhe zakudala zazo okumele siziqhenye, futhi yefa nomndeni wakho iminyaka eminingi ezayo.
Download bhukwana kuqala, futhi uthenge amaphethini ngemuva kokuthi yakuthola elula kungaba. Amaphethini kuthiwa iphuma, futhi ngokuphephile phama amashubhu. Kokuthunyelwa nge neposi ekhaya lakho noma workshop.
emisha ye 2017
Span 'n’ O gavriliuk ir kvitka FLATTIE SKIFF – Ukuze Yokuxhumana Chofoza lapha
Thank You For ngokuvakashela iwebhusayithi yethu